Madaxweyne Biixi oo kulan la qaatay wufuudii caalamka ee ka soo qaybgalay 18 may | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Biixi oo kulan la qaatay wufuudii caalamka ee ka soo qaybgalay...
Madaxweyne Biixi oo kulan la qaatay wufuudii caalamka ee ka soo qaybgalay 18 may
Hargeysa(Berberanews):- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay Wufuudda caalamka ka socday ee ka soo qaybgalay Xuskii 28-guurada ka soo wareegt ee 18-ka May oo Sabtidii shalay dalka laga oogay.
Waxa sidaa lagu sheegay oo lagu faahfaahiyey waxay madaxweynaha iyo xubnaha weftigu ka wadahadleen war-saxaafadeed qoraal ah oo uu ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame Jaamac, kaas oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay warbaahinta Berberanews.com, waxa uu u dhignaa sidatan:-
“Madaxweyne Somaliland oo Kulamo La Qaatay Wufuudii Kala Duwanaa ee Dalalka Dibadda Uga Yimid Ka Qaybgalay Munaasibaddii 18-ka May. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilnad, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xafiiskiisa kulamo kula yeeshay wufuud kala duwan oo isugu jira xildhibaanno, wasiirro iyo diblomaasiyiin, kuwaas oo ka qayb-galay munaasibadda 18-ka May ee 28-guurada kasoo wareegtay markii ay Somaliland xorriyaddeeda dib ula soo noqotay.
Wufuuddan uu madaxweynuhu maanta kulamada la qaatay, ayaa kamid ah weftiyo kala duwan oo Somaliland u yimi ka qaybgalka munaasibadda qaran ee 18-ka May oo maalintii shalay sii heer qaran ah looga dabbaal-degay guud ahaanba dalka iyo dalalka Kale ee caalamka oo ay jaaliyadaha reer Somaliland ku xsueen sannad guuradda 28aad ee 18 May.” Sidaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Somaliland.
Previous articleBoqorka Sucuudiga oo laba Shir-weyne oo deg-deg ah ugu Baaqay Imaaraadka iyo Dolwadaha Carabta
Next article”Joogisteyda 18-ka May ma xalaalaynayso xuskeeda, maqnaanshiiyahayguna xaaraantimeyn maayo!”Cirro